Maitiro Ekutarisa Nyore, Monitor, Uye Gadzirisa Akaputsika Mahara muWordPress | Martech Zone
Martech Zone yapfuura nemazhinji maitire kubvira yatanga muna 2005. Isu tashandura dura redu, tafambisa saiti kuenda ku mauto matsva, uye yakamiswazve zita kakawanda.
Ikozvino pane zvinopfuura zviuru zvishanu zvinyorwa pano zvine vangangoita zviuru gumi zvirevo pane saiti. Kuchengeta saiti ine hutano kune vashanyi vedu uye neinjini dzekutsvaga munguva iyoyo kwave kuri kwakaoma. Imwe yematambudziko aya kuongorora uye kugadzirisa zvakaputsika zvinongedzo.
Zvinokanganisa zvinongedzo zvinotyisa - kwete chete kubva kune chiitiko chevashanyi uye kushungurudzika kwekusaona midhiya, kugona kutamba vhidhiyo, kana kuendeswa kune iyo 404 peji kana yakafa domain ... asi zvakare zvinoratidza zvisina kunaka pane yako saiti saiti uye zvinogona kukuvadza kutsvaga kwako engine authority.
Maitiro Eti Saiti Yako Anounganidza Akavhuniwa MaLinks
Kuwana zvakaputsika zvinongedzo zvakajairika munzvimbo. Kune toni dzenzira dzingaitike - uye ivo vese vanofanirwa kuongororwa nekugadziriswa:
Kutamira kunzvimbo nyowani - Kana iwe ukatamira kunzvimbo nyowani uye ukasanyatso kumisazve ako redirects zvine simba, zvekare ma link mumapeji ako nezvakatumirwa zvingangotadza.
Kugadziridza yako permalink chimiro - Pandakatanga kuburitsa saiti yangu, taimbo sanganisira gore, mwedzi, uye zuva muma URL edu. Ini ndakabvisa izvo nekuti zvaive zvemukati uye zvinogona kunge zvakave nemhedzisiro padanho remapeji iwayo nekuti injini dzekutsvaga dzaiwanzofunga nezve dhairekitori zvimiro sekukosha kwechinyorwa.
Masayiti ekunze ari kupera kana kusatungamira - Nekuti ini ndinonyora nezve zvekunze maturusi uye nekutsvagisa toni, pane njodzi yekuti iwo mabhizinesi anoenda pasi, awanikwe, kana anogona kuchinja yavo yega saiti dhizaini pasina kunyatso kuendesa kwavo maratidziro.
Midhiya yabviswa - zvinongedzo kune zviwanikwa zvemidhiya izvo zvingangodaro zvisipo zvinogadzira maburi mumapeji kana mavhidhiyo akafa andakaisa mumapeji uye zvinyorwa.
Comment Links - makomendi kubva kune ako ega mablog uye masevhisi ayo asisipo aripo akazara.
Nepo maturusi ekutsvaga kazhinji aine chinokambaidza chinozivisa nyaya idzi pane saiti, hazviite kuti zvive nyore kuziva chinongedzo kana midhiya iri kukanganisa uye wopinda wozvigadzirisa. Zvimwe zvishandiso zvinoita basa rinotyisa rekutevera chairo redirects zvakare.
Nekutenda, ivo vanhu vari WPMU uye Shandisa WP - mafemu maviri anoshamisa eWordPress ekutsigira - akagadzira yakakura, yemahara WordPress plugin inoshanda musoni kukunyevera uye kukupa iwe turu yekushandisa yekugadzirisa yako akaputsika ma link uye midhiya.
WordPress Yakaputsika Batanidza Checker
The Yakaputswa Link Checker plugin yakagadzirwa zvakanaka uye iri nyore kushandisa, kutarisa zvemukati, zvekunze, uye nhepfenyuro zvinongedzo pasina kunyanyisa zviwanikwa (izvo zvakakosha kwazvo). Iko kune toni yezvisarudzo zvingakubatsira iwe zvakare - kubva kangani kavanofanira kunge vachiongorora, kangani kutarisa yega link, ndeapi marudzi enhau yekutarisa, uye kunyangwe ndiani anofanirwa kuziviswa.
Iwe unogona kutobatanidza kune iyo Youtube API kuti uone Youtube playlists nemavhidhiyo. Ichi chinhu chakasarudzika chinonyanyopotsa vanokambaira.
Mhedzisiro yacho iri nyore kushandisa dashboard yezvose zvako zvinongedzo, zvakaputsika zvinongedzo, zvinongedzo neyambiro, uye redirects. Iyo dashboard inotokupa iwe ruzivo rwekuti iiri peji, post, komendi, kana imwe mhando yezvirimo izvo zvinongedzo zvakabatanidzwa. Zvakanakisa pane zvese, iwe unogona kugadzirisa chinongedzo ipapo ipapo uye ipapo!
Iyi ipulagi yakatanhamara uye inofanirwa-kuve yega yega yeWebhusaiti saiti iyo inoda kupa yepamusoro mushandisi ruzivo uye kukwidziridza yavo saiti mhedzisiro yekutsvaga mhedzisiro. Nechikonzero ichocho, isu takawedzera icho kune yedu runyorwa rwe zvakanakisisa WordPress plugins!
WordPress Yakaputsika Batanidza Checker Akanakisa eWordPress plugins eBhizinesi
Tags: yakanakisisa Wordpress pluginsyakaputsika link chenjedzobroken link checkertarisa zvakaputsika zvinongedzochakaremara zvinongedzoLinksgadzirisa zvakaputsika zvinongedzotarisa zvakaputsika zvinongedzovhidhiyo yekutarisaWordPressWordpress yakaputsika chinongedzo checkerWordpress pluginwpmanagewpmuYouTube yekutarisaYouTube Video